ယောက်ျားလေးတွေ ရှာဖွေတတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုစွမ်းရည်(၁၅)ချက်
HomeLifestyleယောက်ျားလေးတွေ ရှာဖွေတတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုစွမ်းရည် (၁၅) ချက်
ယောက်ျားလေးတွေ ရှာဖွေတတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုစွမ်းရည် (၁၅) ချက်
ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိဖို့အတွက် သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရည်အချင်းတွေကို သိသိသာသာမရှာဖွေတတ်ကြပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေကို အရူးအမူးစွဲလမ်းသွားအောင် သူမတို့ရဲ့ဘယ်အရာတွေက ဖမ်းစားခဲ့တာလဲ? အဲဒါကတော့ ယောကျာ်းလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူမဖြစ်ခင် တဖတ်သတ်ကြိတ်ကြွေနေကတည်းက သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကို မသိစိတ်ကရှာဖွေနေတတ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့် ယောကျာ်းလေးတွေလှို့ဝှက်စွာ ရှာဖွေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့
ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း အရည်အချင်း (၁၅) ချက်ကို Lifestyle Myanmar ပရိသတ်တွေသိအောင် ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ခြေတလှမ်း ကုဋေတသန်းနဲ့ လျှောက်လာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောကျာ်းလေးတွေစိတ်ဝင်စားတာ သဘာဝကျပါတယ်။ စကားပြောတဲ့အခါတွေ၊ လှုပ်ရှားဟန်တွေ၊ မျက်နှာအမူအယာတွေကအစ တည်ငြိမ်အေးဆေးနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုတော့ မဟာဆန်သူလို့ တင်စားတတ်ကြပြီး ဒါဟာလည်း ဆွဲဆောင်မှုအရည်အချင်း တစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပင်ကိုယ်အလှဟာ မိတ်ကပ်တွေ၊ အရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ခေတ်ပေါ် စတိုင်တွေထက် ပိုပြီးပေါ်လွင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံပင်ခပ်ရှင်းရှင်းစတိုင်နဲ့ မိတ်ကပ်မပါပဲစိုပြေတဲ့ အသားအရည်ပိုင်ရှင် သပ်ရပ်သန့်ရှင်းနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောကျာ်းလေးတွေ ပိုကြွေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုလည်း ယောက်ျားလေးတွေက သဘောကျပါသေးတယ်။ ဥပမာ-ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် အဖြေလိုက်တောင်းတဲ့အချိန်မှာ ဥာဏ်ပညာဗဟုသုတနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးမေးပြီး ဖြေနိုင်မှလက်ခံတာမျိုး (ဒုသမ္မတနာမည်မေးတာ) စတဲ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းပြီး ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကို ချစ်သူအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ချင်တာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုချဉ်းကပ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့တွေဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီး၊ ပညာရေး၊ အသိအမြင်ကြွယ်ဝတာကြောင့် သူတို့ကိုစောင့်ရင်းနဲ့ အဖိုးကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
မိန်းကလေးတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် မွေးလာစဉ်ကတည်းက ယောက်ျားလေးတွေထက် ကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ မွေးလာပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ ကြင်နာသနားတတ်မှုကို ထုတ်ပြတတ်ကြပြီး အချို့ကတော့ လုံးဝကိုပါမလာတတ်ပါဘူး။ ကြင်နာတတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ မိခင်ကောင်းတွေဖြစ်လာတတ်သလို ခင်ပွန်းသည်အပေါ်ကိုလည်း ဂရုစိုက်တတ်ကြတဲ့အတွက် ယောက်ျားလေးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတရပ်အဖြစ် ငြင်းမရနိုင်ပါဘူး။
ဒီကိစ္စမှာတော့ သင်သဘောထားကွဲလွဲချင် ကွဲပါလိမ့်မယ်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေဖြစ်တဲ့ သိပ္ပံဆိုင်ရာတွေ၊ အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းတွေ၊ ဟင်းလျာမီနူးအသစ်တွေကို ယောက်ျားလေးတွေပဲ အများဆုံးဖော်ထုတ်ပြခဲ့တာလို့ သင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်အသေခံငြင်းပါရစေ။ ယောကျာ်းလေးတွေဟာ ဘ၀ပြဿနာတွေကို ထူးခြားတဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ အကူအညီပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင် talent ရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။
စကာားလုံးတွေထက်ပိုတဲ့ အမူအရာတွေက သင့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ပြောပြနေပါတယ်
အုပ်ထိန်းမှုဟာ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်သလို စည်းကမ်းမရှိတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာ အုပ်ထိန်းဖို့ပိုလို့တောင် ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် စည်းကမ်းမရှိရင်တောင်မှ စည်းကမ်းရှိပြီး ကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းထိန်းကျောင်းနိုင်သလို အိမ်ထောင်မှုကျွမ်းကျင်တဲ့ မိန်းကလေး(အပျို) တွေကို ပိုမိုရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။
လူသားတွေရဲ့ အမုန်းဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ သစ္စာဖောက်ခံရမှုကို မီးမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ယောက်ျားလေးတွေဟာ သူတို့သာသစ္စာဖောက်ချင်ဖောက်မယ်၊ သူတို့အပေါ်တော့ သစ္စာရှိမယ့်သူကိုပဲ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူ့ချစ်သူကို နေမကောင်းလို့အနားယူမယ့်အကြောင်းပြောပြီး တဖက်မှသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျောက်ဒိုးနေတဲ့အခါမျိုးမှာ အဆိုပါမိန်းကလေးကို သစ္စာဖောက်မယ့်သူအဖြစ် မသိစိတ်ကသတ်မှတ်ပြီး သိပ်မယုံကြည်တော့ပါဘူး။
လူတိုင်းကို ဖော်ရွေစွာဆက်ဆံတတ်ပြီး စကားပြောလိမ္မာတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောကျာ်းလေးတွေ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နှစ်သက်မှုနဲ့အတူ သ၀န်တိုမှုဟာလည်းကပ်ပါလာတတ်တာကြောင့် အပေါင်းအသင်းဆံ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုရင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
(၉) စစ်မှန် ရိုးသားခြင်း
ဒါကိုတော့ ယခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က အကြောင်းတွေနဲ့တင် သက်သေပြလို့ရပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က မိန်းကလေးချောချောလေးတွေဆို ယောက်ျားလေးတွေ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်တတ်ကြပြီး ရိုးရိုးသားသားလှတာလား၊ photoshop တွေ ၃၆၀ တွေနဲ့ပြင်ထားတာလားဆိုတာ သေချာစူးစမ်းတတ်ကြတယ်။ အေးသောင်းလို ရိုးရိုးအေးအေးလေးနဲ့ အစစ်အမှန်လှတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ ယောက်ျားလေးတွေက ၀န်းရံဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
ဒါလည်းအေးသောင်းကိုပဲ ဥပမာပေးရဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးအများစုဟာ ကလေးလိုဆိုးနွဲ့တတ်တာလေးကို သဘောကျတယ်လို့ ပြောတတ်ကြပေမယ့် မယုံပါနဲ့။ တကယ်တော့သူတို့ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သူကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘယ်ယောက်ျားလေးမှ ကလေးစိတ်ပေါက်နေတဲ့ ချစ်သူကိုအကြာကြီးမတွဲချင်ကြပါဘူး။
အရာရာကို အကောင်းမြင်တတ်ပြီး သဘောထားကြီးတာကလည်း မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအရည်အချင်းတစ်ရပ်လို့ တထစ်ချယုံကြည်မိပါတယ်။ အရာရာကိုခွင့်လွှတ်သည်းခံတတ်ပြီး အကောင်းမြင်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မလိုချင်တဲ့ယောကျာ်းဆိုရင် အဲ့ကောင်ယောက်ျားအစစ် မဖြစ်လောက်ဖူးလို့ယူဆရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူကမှ စောင့်ဆိုင်းရတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် ပြင်ဆင်ရတဲ့အခါ မိန်ကလေးတွေက အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ အချိန်ပိုပေးရကြောင်း ယောက်ျားလေးအတော်များများ နားလည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေရဲ့အချိန်တွေကိုလေးစားတတ်ပြီး ဈေးဝယ်တာ၊ ချိန်းထားတာ စတဲ့ကိစ္စတွေမှာ တိတိကျကျရောက်လာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးကို ဘယ်သူကမလေးစားပဲနေမှာလဲ။
ဒါဟာ ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးပါ အပြန်အလှန်ရှာဖွေတတ်ကြတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအရည်အချင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုမန်တစ်ဆန်ပြီး ရင်ခုန်အောင်အမြဲပြုစားနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ဘယ်ယောက်ျားလေးကမှ လက်လွှတ်ခံကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော အခြားသူတွေအပေါ်မှာပါ လေးလေးစားစားဆက်ဆံတတ်တဲ့စရိုက်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးကို ယောက်ျားလေးတွေသာမက ယောက္ခမတွေကပါချစ်တတ်တာကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရည်အချင်းတစ်ရပ်လို့ မှတ်ယူရပါမယ်။
Relationship တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ကိုသိပ်မချစ်ပဲနဲ့ တွဲတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကို ဘယ်သူကနှစ်သက်မှာလဲ။ ဒါကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရည်အချင်း တစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။
အပေါ်ကအချက်တွေနဲ့ ငါးချက်လောက်ပဲ ကိုက်ညီရင်တောင် သင်ဟာဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း admin ကရဲရဲကြီး ထောက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အိမ်တွင်းမှာ ဘယ်လို ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်မလဲ?
ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်အိမ်မှာ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်...
ဆံကေသာ ကျန်းမာရေးပညာရှင် ရုရှားသူလေးမျှဝေခဲ့တဲ့ ဆံ...
အောင်မြင်တဲ့သူတွေ အိပ်ရာမ၀င်ခင် ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အကျင့် (၇) မျိုး